အစိုးရမှ တောင်သူလယ်သမားများအပေါ် လွဲမှားနေတဲ့ ပေါ်လစီကျင့်သုံးနေကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ တောင်ကြီးမှ လီလီပန်းစိုက်ပျိုးတဲ့ တောင်သူတစ်ဦး ~ Myanmar Online News
အစိုးရမှ တောင်သူလယ်သမားများအပေါ် လွဲမှားနေတဲ့ ပေါ်လစီကျင့်သုံးနေကြောင်း ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တဲ့ တောင်ကြီးမှ လီလီပန်းစိုက်ပျိုးတဲ့ တောင်သူတစ်ဦး
10:00 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာမြေလွတ်‌မြေရိုင်းတွေအများကြီးပါ ။ ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တောင်သူတွေစို က်ပျိုးရေးကို တစစ စွန့်ခွာနေပါသလဲ..? ဒါဟာ ဘာသိဘာသာနေရမယ့်အခြေ အနေတခုမဟုတ်ပါ။ ငါအလုပ် မပြုတ်ပြီးရောဘဲလို့ အချောင်ခိုမနေသင့်ပါ။
ဘာကြောင့်ပါလဲ အစိုးရရဲ့လွဲနေတဲ့ပေါ်လစီ နဲ့ တောင်သူတွေအပေါ်ထိရောက်စွာပံ့ပိုးမှု မရှိလို့ပါ(နည်းပညာပံ့ပိုးမှု ၊ ဈေးကွက်ရရှိ‌အောင်ထိုးဖောက်ကူညီမှု ၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်လေ့လာထားရှိမှု ၊မြေလွတ်မြေရိုင်းများကိုစနစ်တကျဖော်ထုတ်ပေးပြီး တကယ်စိုက်မဲ့တောင်သူများကို စနစ်တကျဌားရမ်းပေးမှု ၊ အခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်များမှားယွင်းနေမှု)စသောစ‌သောအကြောင်းများစွာ ကြောင့်မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ယှဉ်လျှင် အများကြီးနောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်မလက်လှမိးမှီသလောက်မျှဝေပါမယ်။ ကျွန်မလဲတောင်သူပါ လီလီပန်းကို တောင်ကြီးမှာစိုက်ပါတယ်
ဟော်လန်နိုင်ငံမှမျိုးစေ့ကိုတိုက်ရိုက်တင်သွင်းပါတယ် ။စိုက်ချင်တဲ့တောင်သူများကိုမျိုးစေ့ဖြနိ့ရောင်းချပြီးနညိးပညာဖြန့်ဝေပါတယ် ။
မျိုးစေ့ပေါ်မှာအခွန် ၂၂ ရာနှုန်းကောက်ပါတယ်။ မျိုးဥတဥရဲ့တင်သွင်းစရိတ် နဲ့ပေါယင်းလိုက်ရင် အရင်း တဥကို ကျပ်ငွေ ၅၀၀ ကျော်မှ ၇၀၀ ကျော်ထိရှိပါတယ် စိုက်ပျိုးစရိတ်ပေါင်းလိုက်ပြီး၃ လစောင့်လို့ပန်းပွင့်ရင် အရင်းပဲ ၆၀၀ မှ ၈၀၀ ထိရှိပါတယ်။
ဈေးကွက်မှာတရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှလီလီပန်းမျယးနည်းမျိုးစုံနဲ့၀င်ပါတယ် အခွန်ပေးရလယး မပေးရလားမသိပါ။ ဈေးကွက်မှာတရုတ်ပန်းက တခိုင်ကို ၀င်ဈေး ၅၀၀ မှ ၅၅၀ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်မတိုးတိုင်းရင်းသားတောင်သူတွေဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ပါ့မလဲ။ ကျွန်မလေ့လာထားသမျှ တရုတ်ပြည်မှာ ပန်းမျိုးစေ့ကို တရုတ်အစိုးရကအခွန်မကောက်ပါ။ Export ရှိမှာသာအခွန်ကောက်ပါတယ် ။ပြညိတွင်းမှာရောင်းရင်အခွန်မရှိပါ ။
သူတို့ရဲ့အရင်းက ကျွန်မတို့ထက်နည်းနေပါပြီ။ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ပန်းတွေကိုသူတို့က ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပကိုပို့ပါတယ် ။ ပြည်ပကိုပို့ရမှာဈေးကောင်းရပါတယ်။ လီလီပန်းကတခါစိုက်ရင် ၂ကြိမ် ခူးလို့ရပါတယ် ၂သီးစားလို့ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ပထမအကြိမ်မှာတင် အရ်ငးကျေလို့ အမြတ်ရနေပါပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုနယ်စပ်ကနေ၀င်လာတဲ့ပန်းတွေက ဒုတိယအြကီမ်ထပ်ပွင့်တဲ့ပန်းတွေပါ လုံး၀အမြတ်သက်သက်ပါ ဈေးချပြီးရောင်းပါတယ် ။ မြန်မာမှာလီလီဆိုတာသူတို့သွသ်းမှမြင်ဘူးကြတာ အမြတ်တနိုးဘုရားကပ်လျုကြပါတယ်
ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ၊ ၄ နှစ်လောက်ကပါ ။
တွေမိမိတို့ဖာသာမျိုးစေ့သွင်းပြီးစိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ အခွန်ကောက်နှုးမြင့်အားမှု ၊ နယ်စက်မှတခါးမရှိဓားမရှိ၀င်ရောက်လာတဲ့ပန်းတွေကို ယှဉ်ပြိုင်မရလို့တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေရပါတယ်။ သီရိမဂလာဈေးမှာ ပြည်တွင်းပန်းကို အ၀င်မခံပဲ တရုတ်ပန်းတွေကြီးလှိုင်လှိုင်တွေ့နေရတာ တိုင်းရင်းသားတောင်သူကို သတ်နေသလိုရင်နာစွာခံစားရပါတယ် ။
တောင်သူတချို့မှနယ်စပ်မှလီလီပန်း၀င်ရောက်မှုကို ပိတ်ကေးရန်တင်ပြပါသော်လဲ ခနတာအရောင်ပြပြီးပိတ်လိုက်သော်လဲ ၀င်မြဲ‌၀င်စဲပါ ။Wuhan Virus ကြောင့်တရုတ်ပြည်မှ ပစည်းတင်သွင်းမှုက်ုနိုင်ငံတကာမှာထေတရပ်ဆိုင်းထယးငြောင်းဖတ်ရှုရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ Wuhan Virus လဲမကြောက် တရုတ်ကုန်သည်များလဲမကြောက်ပဲ နယ်စပ်မှာအ၀င်တသဲသဲပါပဲ ။တရက်ကို တရုတ်နယ်စပ်မှ တနေ့ကို ၂၀၀၀၀၀ လီလီပန်း ၀င်ရောက်ပါတယ်။ တခိုင်ကို ၅၀၀ ကျပ်နှင့်တွက်ပါက ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှ နေ့စဉ် ကျပ်ငွေ သိန်းတထောင် သူများနိုင်ငံကိုစီးမျောသွားပါတယ်။ ငွေတွေထွက်မဲ့အစားဒီငွေတွေကျွန်မတို့နိုင်ငံတွင်းမှာပဲ လည်ပတ်‌ အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လျင် နိုင်ငံသားတောင်သူတွေလဲအကျိုးရှိ နိုင်ငံလဲအကျိူရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်...
Source - Kay Thwe Aung
Thursday , February 13 , 2020
မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာမြေလွတ်‌မြေရိုင်းတွေအများကြီးပါ ။ ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တောင်သူတွေစို က်ပျိုးရေးကို တစစ စွန့်ခွာနေပါသလဲ..? ဒါဟာ ဘာသိဘာသာနေရမယ့်အခြေ အနေတခုမဟုတ်ပါ။ ငါအလုပ် မပြုတ်ပြီးရောဘဲလို့ အချောင်ခိုမနေသင့်ပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲအစိုးရရဲ့လွဲနေတဲ့ပေါ်လစီ နဲ့ တောင်သူတွေအပေါ်ထိရောက်စွာပံ့ပိုးမှု မရှိလို့ပါ(နည်းပညာပံ့ပိုးမှု ၊ ဈေးကွက်ရရှိ‌အောင်ထိုးဖောက်ကူညီမှု ၊ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်လေ့လာထားရှိမှု ၊မြေလွတ်မြေရိုင်းများကိုစနစ်တကျဖော်ထုတ်ပေးပြီး တကယ်စိုက်မဲ့တောင်သူများကို စနစ်တကျဌားရမ်းပေးမှု ၊ အခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်များမှားယွင်းနေမှု)စသောစ‌သောအကြောင်းများစွာ ကြောင့်မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ယှဉ်လျှင် အများကြီးနောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ။
ဈေးကွက်မှာတရုတ်ပြည်နယ်စပ်မှလီလီပန်းမျယးနည်းမျိုးစုံနဲ့ဝင်ပါတယ် အခွန်ပေးရလယး မပေးရလားမသိပါ။ ဈေးကွက်မှာတရုတ်ပန်းက တခိုင်ကို ဝင်ဈေး ၅၀၀ မှ ၅၅၀ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။ ကျွန်မတိုးတိုင်းရင်းသားတောင်သူတွေဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်ပါ့မလဲ။ ကျွန်မလေ့လာထားသမျှ တရုတ်ပြည်မှာ ပန်းမျိုးစေ့ကို တရုတ်အစိုးရကအခွန်မကောက်ပါ။ Export ရှိမှာသာအခွန်ကောက်ပါတယ် ။ပြညိတွင်းမှာရောင်းရင်အခွန်မရှိပါ ။
သူတို့ရဲ့အရင်းက ကျွန်မတို့ထက်နည်းနေပါပြီ။ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ပန်းတွေကိုသူတို့က ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပကိုပို့ပါတယ် ။ ပြည်ပကိုပို့ရမှာဈေးကောင်းရပါတယ်။ လီလီပန်းကတခါစိုက်ရင် ၂ကြိမ် ခူးလို့ရပါတယ် ၂သီးစားလို့ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ပထမအကြိမ်မှာတင် အရ်ငးကျေလို့ အမြတ်ရနေပါပြီ ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုနယ်စပ်ကနေဝင်လာတဲ့ပန်းတွေက ဒုတိယအြကီမ်ထပ်ပွင့်တဲ့ပန်းတွေပါ လုံးဝအမြတ်သက်သက်ပါ ဈေးချပြီးရောင်းပါတယ် ။ မြန်မာမှာလီလီဆိုတာသူတို့သွသ်းမှမြင်ဘူးကြတာ အမြတ်တနိုးဘုရားကပ်လျုကြပါတယ်
တွေမိမိတို့ဖာသာမျိုးစေ့သွင်းပြီးစိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ အခွန်ကောက်နှုးမြင့်အားမှု ၊ နယ်စက်မှတခါးမရှိဓားမရှိဝင်ရောက်လာတဲ့ပန်းတွေကို ယှဉ်ပြိုင်မရလို့တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေရပါတယ်။ သီရိမဂလာဈေးမှာ ပြည်တွင်းပန်းကို အဝင်မခံပဲ တရုတ်ပန်းတွေကြီးလှိုင်လှိုင်တွေ့နေရတာ တိုင်းရင်းသားတောင်သူကို သတ်နေသလိုရင်နာစွာခံစားရပါတယ် ။
တောင်သူတချို့မှနယ်စပ်မှလီလီပန်းဝင်ရောက်မှုကို ပိတ်ကေးရန်တင်ပြပါသော်လဲ ခနတာအရောင်ပြပြီးပိတ်လိုက်သော်လဲ ဝင်မြဲ‌ဝင်စဲပါ ။Wuhan Virus ကြောင့်တရုတ်ပြည်မှ ပစည်းတင်သွင်းမှုက်ုနိုင်ငံတကာမှာထေတရပ်ဆိုင်းထယးငြောင်းဖတ်ရှုရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ Wuhan Virus လဲမကြောက် တရုတ်ကုန်သည်များလဲမကြောက်ပဲ နယ်စပ်မှာအဝင်တသဲသဲပါပဲ ။တရက်ကို တရုတ်နယ်စပ်မှ တနေ့ကို ၂၀၀၀၀၀ လီလီပန်း ဝင်ရောက်ပါတယ်။ တခိုင်ကို ၅၀၀ ကျပ်နှင့်တွက်ပါက ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှ နေ့စဉ် ကျပ်ငွေ သိန်းတထောင် သူများနိုင်ငံကိုစီးမျောသွားပါတယ်။ ငွေတွေထွက်မဲ့အစားဒီငွေတွေကျွန်မတို့နိုင်ငံတွင်းမှာပဲ လည်ပတ်‌ အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့လျင် နိုင်ငံသားတောင်သူတွေလဲအကျိုးရှိ နိုင်ငံလဲအကျိူရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်